Kala shaki soo kala dhex galay Villa Somalia iyo Xildhibaanada ay soo saartay | Baydhabo Online
Kala shaki soo kala dhex galay Villa Somalia iyo Xildhibaanada ay soo saartay
Madaxtooyada Somaliya oo si musuq maasuq leh ku soo saartay xubno u daacad ah, oo ka mid noqonaya Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegay in uu kala shaki soo kala dhex galay labada dhinac.
Kala shakigan, ayaa ka dambeeyay markii Xildhibaanadan ay siyaabooyin kala duwan ula kulmeen qaar ka mid ah murashixiinta u taagan jegada madaxtinimada ee dalka.
Tani, ayaa waxay ka careysiisay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xertiisa (Dam Jadiid), waxaana la leeyahay waxay dhaawacday kalsoonidii ay ku qabeen Xildhibaanadaasi.
Xildhibaanadan oo lagu soo doortay Magaalooyinka Garoowe, Cadaado, Jowhar, Kismaayo iyo Baydhabo, ayaa kulamo kala duwan la yeeshay murashixiinta, oo qaarkood booqashooyin ku tagey magaalooyinkaasi.
Sidoo kale xubno ka mid ah Xildhibaanadaasi oo soo gaaray Magaalada Muqdisho, ayaa hoteelada Caasimadda kula kulmay murashixiin kale, iyagoona ka wada hadlay doorashada Madaxweynaha (2016).
Dhacdo.com, ayaa ogaatay in Xildhibaanadan kal hore lagula ballamay inaanay la kulmin murashixiinta ay is hayaan Madaxweyne Xasan Sheekh, oo markale sanadkan u taagan hogaaminta wadanka.
Sharci-yaqaanada, ayaa qaba in Golaha Shacabka ay xaq u leeyihiin inay la kulmaan murashixiinta, si ay uga dhageystaan waxyaabaha ay qaban doonaan, haddii ay jegadaasi ku soo baxaan.
Sidoo kale Xildhibaanadan, ayaa waxaa la tilmaamay inay danahoodu ka dhex arkayn murashixiintan, sababo ku aadan, iyagoo aan taageero dambe ka fileynin xerta Madaxweyne Xasan.
Siyaasi codsaday inaanan magaciisa la soo xigan oo la hadlay Dhacdo.com, ayaa yiri “Xildhibaanadu wixii dhaqaala ah ee ay ka cuni karayn Madaxweynaha iyo saaxiibadiis way ka cunayn, hadana waxay dhaqaale ka raadinayan murashixiinta kale. Kooxdan waxaa cad inaysan dhaqaale kale ku bixin doonin Xildhibaanada.”
Midda xiisaha leh, ayaa waxay tahay, iyadoo qaar ka mid ah Xildhibaanadan la arkay, iyagoo u ololeynaya murashixiinta kale, ee ay is hayaan Madaxweyne Xasan.
Dadka fallanqeeya arrimaha Somaliya, ayaa waxay aragtidoodu tahay in si musuq maasuq leh, ay Xildhibaanadu kaga weecan karto Villa Somalia, maadaama ay markii horeba ku yimaadeen gacan bidixeen.
Shakiga ku yimid Villa Somalia, ayaa waxaa ay sii xoojin doontaa tartanka kala dhaxeeya murashixiinta, waxaana dhici karta in doorashada looga adkaado, haddii dhuunta loo galay.
Dhanka kale waxaa suuqa soo galay suurtagalnimada inay isbahaysi noqdaan murashixiinta, uu xifaaltanka kala dhaxeeyo kooxda Dam Jadiid, oo afartii sano ee la soo dhaafay ka arrimineysay Villa Somalia.
Si kastaba ha-ahaatee bulshada Somaliyeed oo saluugsan siyaasadda khalafsan ee Villa Somalia, ayaa waxay rajadoodu tahay in (Kawaanka 2016) lagu gowraco Xasan Sheekh iyo xertiisuba, si aysan markale ugu soo laaban Madaxtooyada Muqdisho.